Sweden oo sheegtay inaysan waxba iska beddelin Siyaasadda Dadka Magangelyo-doonka ah – idalenews.com
Wasiirka Is-dhexgalka ee Dowladda Sweden, Erik Ultenhag ayaa sheegay inaysan jirin wax qorshe ah oo lagu dhimayo Qaxootiga Magangelyo-doonka ah ee dalka Swecen imaanayo.
Wasiirka Is-dhexgalka ee Dowladda Sweden, Erik Ultenhag oo ka tirsan Xisbiga Liberalka ee (Folkpartiet), waxa uu sheegay inuu Xisbigiisu difaacayo Siyaasadda Magangeliyadda ee Qaxootiha, wuxuuna xusay inay Siyaasadaasi tahay mid ay albaabadda ugu furayaan Calamka.
Wasiirka oo ka hadlayey Kulan looga hadlayey Soo-galootiga Soomaalida, iyadoo ay Hay’adda Fores Think Tank soo qabanqaabisay Kulankaasi, oo looga xaajoonayey Siyaasadda Dhabta ee Dowladda Sweden ee magangeliyadda lagu siinayo Qaxooyiga Shisheeyaha.
Idaacdda Sweden “Sveriges Radio (SR) ayaa ka soo xigatay Wasiirkaasi inaysan jirin wax iska beddelay Siyaasadda Dowladda ku shaqeynayso ee dhinaca Dadka Magangeliyo-doonka.
“Xisbiyadda kala duwan waxay kala leeyihiin Barnaamij Siyaasad-kooxeed. Mana jiraan wax qorshe ah oo ay Dowladdu ku dabrayso ama ku yaraynayso Siyaasadda Magangeliyadda.
Hadalka Wasiirka ayaa yimid, kadib, markii uu Wasiirka Socdaalka ee Sweden, Tobias Billstrom oo sheegay inaan la maareryn karin heerka dadka Magangelyo-doonka ee imaanayo Sweden.
Billstrom ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi maalintii Sabtida ee la soo dhaafay lagu soo daabacay Wargeyska Dagens Nyheter, isagoo xusay inaan la taageeri karin tiradda sii kordhayso ee Qaxootiga Soo-galootiga ah.
Hadalka Ismaandhaafka ee Labadasi mas’uul ayaa lagu sheegay inuu salka ku hayo Siyaasadda Labada Xisbi ee ay ka kala tirsan yihiin.
Golaha Wasiirrada oo ka dooday maamul sameysashada gobollada iyo qaadista canshuurta